१७ साउन, बुटवल । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को संक्रमण पुष्टि भएका दुई जना सम्पर्कविहीन बनेका छन् । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा कोरोना पुष्टि भएको जानकारी पाएलगत्तै उनीहरु सम्पर्कविहीन भएका हुन् । शुल्क तिरेर गरिने परीक्षणका लागि उनीहरुले शुक्रबार स्वाब दिएका थिए । पोजेटिभ रिपोर्ट आएको जानकारी पाएलगत्तै उनीहरु सम्पर्क बाहिर गएको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र गिरीले बताए । उनीहरुले आˆनो ठेगाना बुटवल वडा नं. ६ र सम्पर्क नम्बर एनसेलको मोबाइल नम्बर टिपाएका थिए । नतिजा पोजेटिभ आएको भन्ने पहिलो कल रिसिभ गरेका उनीहरुसँग त्यसपछि सम्पर्क नहुने नसकेको डा. गिरीले बताए । स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनलाई खोजीका लागि अनुरोध गरिएको उनले बताए । प्रयोगशाला प्रमुख डा.गिरीका अनुसार उनीहरुले भारतबाट आएको र पुनः भारत जानका लागि पीसीआर परीक्षण गराउन आएको बताएका थिए । | Public 24Khabar
Home Health १७ साउन, बुटवल । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को संक्रमण पुष्टि भएका दुई जना...
१७ साउन, बुटवल । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को संक्रमण पुष्टि भएका दुई जना सम्पर्कविहीन बनेका छन् । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा कोरोना पुष्टि भएको जानकारी पाएलगत्तै उनीहरु सम्पर्कविहीन भएका हुन् । शुल्क तिरेर गरिने परीक्षणका लागि उनीहरुले शुक्रबार स्वाब दिएका थिए । पोजेटिभ रिपोर्ट आएको जानकारी पाएलगत्तै उनीहरु सम्पर्क बाहिर गएको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र गिरीले बताए । उनीहरुले आˆनो ठेगाना बुटवल वडा नं. ६ र सम्पर्क नम्बर एनसेलको मोबाइल नम्बर टिपाएका थिए । नतिजा पोजेटिभ आएको भन्ने पहिलो कल रिसिभ गरेका उनीहरुसँग त्यसपछि सम्पर्क नहुने नसकेको डा. गिरीले बताए । स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनलाई खोजीका लागि अनुरोध गरिएको उनले बताए । प्रयोगशाला प्रमुख डा.गिरीका अनुसार उनीहरुले भारतबाट आएको र पुनः भारत जानका लागि पीसीआर परीक्षण गराउन आएको बताएका थिए ।
१७ साउन, बुटवल । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को संक्रमण पुष्टि भएका दुई जना सम्पर्कविहीन बनेका छन् ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा कोरोना पुष्टि भएको जानकारी पाएलगत्तै उनीहरु सम्पर्कविहीन भएका हुन् । शुल्क तिरेर गरिने परीक्षणका लागि उनीहरुले शुक्रबार स्वाब दिएका थिए
पोजेटिभ रिपोर्ट आएको जानकारी पाएलगत्तै उनीहरु सम्पर्क बाहिर गएको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र गिरीले बताए ।
उनीहरुले आˆनो ठेगाना बुटवल वडा नं. ६ र सम्पर्क नम्बर एनसेलको मोबाइल नम्बर टिपाएका थिए । नतिजा पोजेटिभ आएको भन्ने पहिलो कल रिसिभ गरेका उनीहरुसँग त्यसपछि सम्पर्क नहुने नसकेको डा. गिरीले बताए ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनलाई खोजीका लागि अनुरोध गरिएको उनले बताए । प्रयोगशाला प्रमुख डा.गिरीका अनुसार उनीहरुले भारतबाट आएको र पुनः भारत जानका लागि पीसीआर परीक्षण गराउन आएको बताएका थिए ।
Previous articleयसरि कु’टिए प्रेम संजेल !! कस्तो यस्तो गर्याे ?
Next articleश्रीमान भारतमा छन्, पहिरोले श्रीमती दुई छोरा र १० महिनाकी छोरीको लियो ज्या न